एकपटक मेकअप तीन वर्ष ढुक्क, जान्नुहोस ! कति लाग्छ खर्च ? « Pariwartan Khabar
एकपटक मेकअप तीन वर्ष ढुक्क, जान्नुहोस ! कति लाग्छ खर्च ?
5 February, 2018 10:10 am
मेकअपका नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्रिरहेका छन् । आफूलाई सुन्दर देखाउन मानिस पनि मेकअपमा निकै कन्सस हुन थालेका छन् । तर, सचेत हुँदाहुँदै पनि कतिपय गलत मेकअपको सहारा लिन पुग्छन् । त्यसैले कतिको लामो समयसम्म मेकअप नटिक्ने समस्या पनि हुन सक्छ । त्यस्ता मानिसका लागि वाटरप्रुफ मेकअप फलदायी हुन्छ । जसलाई पानी र पसिनाले कुनै असर पुर्याउदैन । त्यस्तै, नेपालमा पर्मानेन्ट मेकअप पनि शुरु भएको छ । समयको बचत गर्न चाहने र व्यस्त मानिसका लागि यस्तो मेकअप निकै उपयोगी बन्न सक्छ भन्छिन व्युटिसियन लक्ष्मी
के हो पर्मानेन्ट मेकअप ?
पर्मानेन्ट मेकअप लामो समयसम्म टिक्छ । यसलाई मचाहिँ सेमी–पर्मानेन्ट मेकअप भन्न रुचाउँछु। यस्तो मेकअप एकपटक गरेपछि तीन वर्षसम्म टिक्छ ।
मेकअप कस्तो हुन्छ ?
पर्मानेन्ट मेकअपमा सबैभन्दा बढी आइब्रो र ओठको मेकअप पर्छ । यसमा मानिसको चाहनाअनुसारको मेकअप गर्न सकिन्छ । जस्तो कि आइब्रोको कलर चेन्ज, आइब्रोलाई मोटो बनाउने आदि । ओठमा पनि विभिन्न प्रकृतिको मेकअप गर्न सकिन्छ ।
पर्मानेन्ट मेकअपले स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारको नकारात्मक असर पर्दैन । मेकअपलाई छालाको माथिल्लो भागमा राखिन्छ । तर, मेकअप गर्दाचाहिँ होसियारी अपनाउन जरुरी छ ।
कस्ताले नगर्ने ?
विचार पुर्याउनुपर्ने कुरा के भने सबै मानिसले यस्तो प्रकारको मेकअप गर्न चाहिँ मिल्दैन । डायबिटिज, ब्लडप्रेसर, छालाको संक्रमण हुने व्यक्ति यस्तो मेकअप भुलेर पनि गर्नुहुँदैन ।
मेकअपपछि के गर्ने?
मेकअपपछि सातदिनसम्म छाला सुक्खा राख्नुपर्छ । घाममा हिँड्नु हुँदैन । धुलोबाट बच्ने, बढी पसिना बग्ने गरी काम नगर्दा राम्रो हुन्छ ।
यस्तो मेकअपमा इंक र लिक्विडको प्रयोग गरिन्छ । मेकअप राख्ने बेला दुखाइ हुन्छ । मेसिनरी सामग्रीका माध्यमबाट यस्तो मेकअप गरिन्छ । मेहअप गर्दा निडल्सको पनि प्रयोग हुन्छ । मेकअपको क्वालिटी अनुसार मूल्य निर्धारण हुन्छ । नेपालमा १० देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म यस्तो मेकअप गर्न सकिन्छ ।